Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. बेलायतमा अन्डरवल्र्ड ‘दाउद’ को ४२ करोड सम्पत्ति जफत – Emountain TV
बेलायतमा अन्डरवल्र्ड ‘दाउद’ को ४२ करोड सम्पत्ति जफत
एजेन्सी, २८ भदौ । भारतको प्रख्यात माफिया ग्याङस्टर दाउद इब्राहिमको बेलायतमा रहेको लगभग ४२ हजार करोड भारु बराबरको सम्पत्ति बेलायत सरकारले जफत गरेको छ । विश्व कै दोस्रो धनि अपराधीको नामले प्रख्यात डन दाउदको ब्रिटेनमा नै अझै करौडौको सम्पत्ति रहेको बेलायतको अनलाइन न्युज एजेन्सीले जनाएको छ ।
६१ वर्षीय दाउदको बेलायतको मिडल्याण्ड लगाएतका उन्य प्रान्तमा करोडौँको सम्पत्ति रहेको दाबी गरिएको छ । जसका लागि उनले आफ्नै २१ वटा नाम नक्कली नाम बनाएर सम्पत्ति राखेको बेलायत सरकारले दाबी गरेको हो । भारतीय मुलका दाउदको बेलायत लगाएत दबई, पाकिस्तान र भारतमा समेत गैर कानुनी अकुत सम्पत्ति रहेको उनीहरुको दाबी छ । भारतीय प्रहरीका अनुसार बेलायतले ४२ करोड भारुको सम्पत्ति जफत गरेपछि भने अब भने दाउद र उनका साथीहरुलाई कानुनको दायरामा आउन दबाव पर्छ ।
दाउदको भारतमा मात्रै एक बिलिएन डलर भन्दा माथिको प्रोपर्टीहरु रहेको छ । जसको सोर्स भने फिल्म पाइरेसी, हप्ता र प्राय फिल्ममा उनको लगानी रहेको उक्त पत्रिकाको अनुमान छ ।
यो बाहेक उनको भारतमा डि कम्पनी नामक माफिया कम्पनी छ जसले कालोबजारी, लागु औषध व्यापार र हत्याकाण्ड लगाएतका गैरकानुनी काम गर्दै आएको छ ।
यसबाहेक नक्कली नोट कारोबारमा पनि उनको ठुलो हात रहेको सो एजेन्सीले उल्लेख गरेको छ ।